Faahfaahin: Al-Shabaab oo Khaarajisay Taliyihii Qeybta 12-aad ee Ciidanka DF. – Shabakadda Amiirnuur
Faahfaahin: Al-Shabaab oo Khaarajisay Taliyihii Qeybta 12-aad ee Ciidanka DF.
December 6, 2018 3:39 pm by admin Views: 170
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar maanta ka dhacay wadada xeebta ee isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Marko ee gobolka Shabeelaha hoose.
Weerarka oo ahaa qarax aad u xooggan ayaa waxaa duleedka degaanka Jasiira lagula beegsaday gaari nuuca dagaalka ah oo uu saarnaa Janaraal kamid ah hogaanka ciidamada DF iyo koox askar ah.
Haddaba weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan, waxaana dadka ku dhintay kamid ah Jeneraal Cumar Dheere oo ahaa taliyaha qeybta 12-aad ee ciidamada Melleteriga DFS.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa war rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in qaraxa ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda “Taliyihii qeybta 12-aad ee ciidanka Murtadiinta Cumar dheere iyo abaan duuliyihiisi iyo 8 askari ayaa ku dhintay qarax mujaahidiintu kula beegsadeen duleedka deegaanka Jaziira” Sidaasi waxaa lagu yiri warka kasoo baxay Xarakada Al- Shabaab.
Intaa waxa dheer oo qaraxii maanta ku dhintay Abaanduulihii ciidamada dowladda ee deegaannada Xeebta oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cali Jamaame.
Sidoo kale goob joogayaal ayaa shabakadda Amiirnuur.com u sheegay in saraakiil sarsare oo kamid ahaa hogaanka ciidamada ku sugan deegaannada Dhanaane iyo magaalada Marko ay kamid ahaayeen askartii ku dhimatay qaraxii maanta.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay xukuumadda Federalka ah oo ku aadan dhacdadan. Balse General Cumar Dheere ayaa xukuumaddii ay Xabashidu soo galbisay ee Cali Maxamad Geedi ka noqday wasiir ku xigeenkii Gaashaandhigga, wuxuuna markii dambe ka mid noqday saraakiishii ciidamada DFKM ee Xabashida Itoobiya usoo gelbiyay gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Cumar Dheere ayaa mar aan fogeyn ciidamo ka tirsan kuwa DF ugu khudbeeyay iney qabsanayaan dhulka xeebta ku teedsan ee u dhaxeeya Marko iyo Muqdisho, waxaana geeridiisa ay niyad jabineysaa ciidamadii uu doonayay inuu galiyo halista uu isagu la kulmay iyo kuwa lamidka ah.